7. Student (Application Form) | Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar, Los Angeles, U.S.A
Home » Data » 7. Student (Application Form)
Requirement: Student PPT Renewal Form
(င) ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားရန် ညွှန်ကြားချက်
အထက်တန်းကျောင်း၊ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်နေသာ ကျောင်းသား များ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ (စာရွက်အလွတ်များ မိတ္တူကူးရန်မလိုပါ)
– ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ ( ၆ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ၊ အရွယ်အစား ၂” x ၂”၊ နောက်ခံအဖြူ ) (ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအား ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွင် ကပ်ပေးပါရန်)
– ထိုးမြဲလက်မှတ်(လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံတွင် ထိုးမြဲ လက်မှတ်အား ရေးထိုးပေးရန် လိုအပ် ပါသည်။)
– အ‌မေရိကန်နိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြား ရောင်စုံမိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်၊ ဗီဇာ အ‌ထောက်အထား၊ သို့မဟုတ်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် အ‌ထောက်အထား
– ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ ထောက်ခံစာ
– သက်တမ်းရှိ ကျောင်းသားကတ်ပြားမိတ္တူနှင့် I-20 ရှိပါက မိတ္တူ
– ငွေ‌ပေးသွင်းခြင်း (ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ အခွန်အခများ ပေးဆောင်ရာတွင် Money Order ၊ သို့မဟုတ်၊ Cashier Check ၊သို့မဟုတ် Cash ဖြင့်‌ပေးသွင်းရန်၊ Pay to နေရာတွင် Myanmar Consulate General ကိုလည်းကောင်း၊ From နေရာတွင် ပေးသွင်းသူအမည်နှင့် လိပ်စာတို့ကို ဖြည့်သွင်းရန်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ခ၊ ၀င်ငွေခွန်တို့ကို MO/Check သီးခြား တစ်စောင်စီခွဲ၍ ပေးသွင်းရန်)
Student PPT Renewal Form